मन्त्रिपरिषद् बिस्तारको तयारीमा प्रधानमन्त्री Global TV Nepal
मन्त्रिपरिषद् बिस्तारको तयारीमा प्रधानमन्त्री
ग्लोवल टि.भी. बिहिबार, जेष्ठ २७, २०७८ 0
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्दैछन् । अहिले ८ मन्त्रालय आँफैसंग राखेका ओलीले मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्न लागेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले ७ मन्त्री र १ राज्यमन्त्रीलाई नियुक्त गरेर मन्त्रिपरिषद् बिस्तारको तयारी थालेको वालुवाटार श्रोतले बताएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति , कृषि तथा पशुपंक्षी विकास, गृह, वन तथा वातावरण, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा नयाँ नियुक्त गर्न लागेका हुन् । उनले पछिल्लो पटक जेठ २१ गते जसपालाई समेटेर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेका थिए ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध कर्णलीका पत्रकार सडकमा
सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग माग्यो प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको कारण
देव गुरुङ भन्छन्–प्रमुख सचेतक फेर्न ओलीलाई नैतिकताले दिन्छ र ?
संसदलाई जिवन्त बनाउनु चुनौतिपूर्ण
इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा एस्टन भिल्ला पराजित
नवलपरासी बुलिङटारमा सुख्खा पहिरो, ५ जनाको मृत्यु